बाख्रागोठालाले पत्ता लगाएको कफी : ‘मुस्लिम पेय’ भनी चर्चले प्रतिबन्ध समेत लगाएको थियो | Ratopati
कफी गफ हैन, कफीको गफ हो
बाख्रागोठालाले पत्ता लगाएको कफी : ‘मुस्लिम पेय’ भनी चर्चले प्रतिबन्ध समेत लगाएको थियो
कफी सेवन गर्नेहरु असामयिक मर्ने खतरा नगर्नेको तुलनामा ६४ प्रतिशत कम हुन्छ
आजभोलि मात्रै हैन, आजभन्दा सात सयवर्षअघिदेखि अर्थात् १४ औं शताब्दीको मध्यदेखि नै कफी आम मानिसहरुको दैनिक जीवनको एक अनिवार्य हिस्सा बनिसकेको थियो । कफीको उत्पत्ति कहिले र कसरी भयो, यकीनका साथ भन्न सकिन्न तर यसको उत्पत्ति र उपयोगका बारेमा धेरै कथा किस्साहरु पढ्न र सुन्न पाइन्छ । ती कथा र किस्साहरुको सार चाहिँ मूलतः एउटै हुने गर्छः कफी आम मानिसको दैनिक जीवनको एक महत्वपूर्ण हिस्सा कसरी बन्यो र त्यो कसरी फैलियो ।
कफी शब्दको अरबी मूलो
अंगेजीको coffee शब्द अरबी शब्द qahwah बाट आएको विश्वास एकाथरिले गर्ने गर्छन्, जसको अर्थ चाहिँ एक किसिमको वाइनलाई जनाउने हुन्छ ।
कफी शब्दको उत्पत्तिका बारेमा भाषाविद्हरुले थुप्रै मान्यताहरु विकसित गरेका छन् । तीमध्ये धेरैले के विश्वास गर्छन् भने वाइनले जस्तै कफीमा पाइने क्याफिनमा पनि केही शक्तिबद्र्धक क्षमता हुने गर्छ । त्यसही सिलसिलामा अरबी qahwah को अर्थ पनि पावर÷शक्ति वा अझ शाब्दिक अनुवाद गर्दा चाहिँ भोक नलाग्नु पनि हुन्छ । यस अर्थमा कफी खाएपछि भोक कम लाग्ने भएकोले यसको सम्बन्ध त्यही अरबी वाइनसँग जोडिएको हुन सक्ने आँकलन पनि गरिन्छ । त्यसो त अर्को सिद्धान्त अनुसार, कफी काफा नाम गरेको मध्यकालीन इथिओपियाली राज्यबाट आएको हुनुपर्छ, जहाँबाट कफीको विरुवा पहिलो पटक अरेवियामा निर्यात भएको थियो ।
कसैलाई थाहा छैन, कफी कसले पहिले पत्ता लगाए
कफी कसले पत्ता लगाए भन्नेबारे विभिन्न धारणा प्रचलित छ । इथिओपियाको काफामा काल्दी नाम गरेका गोठालाले पहिलो पटक नवौं शताब्दीमा कफी पत्ता लगाएको एकाथरिको विश्वास छ । ती गोठालाले कफीको गेडालाई सेवन गर्दा आफूलाई धेरै फूर्ती आएको महसूस गरेको र कालान्तरमा त्यसैलाई पकाएर खाने चलन शुरु भएको मानिन्छ ।
त्यहीसँग मिल्दोजुल्दो अर्को कथन पनि छ । त्यसअनुसार, मोरक्कोका सुफी सन्त घोथुल अकबर नुरुद्दीन अबु अलहसन अल–सादिल इथियोपिया जाँदा त्यहाँका चराहरु अनौठा ढंगले फूर्तिला भएको देखे । उनले खोज्दै जाँदा त्यहाँका चराहरुले कफीको गेडा खाने गरेको र त्यहीकारण फूर्तिलो भएको पाए । उनले पनि कफीका केही गेडाहरु सेवन गर्दा आफूमा पनि स्फूर्ति आएको पाए । भनिन्छ, उनैले नै त्यो कफीको गेडा अरबमा ल्याएर खेती गर्न थालेका हुन् ।
पहिले कफीको गेडा नै खाइन्थ्यो
अहिले हामी कफी भन्नेबित्तिकै चियाजस्तै पेय पदार्थ भनेर बुझिहाल्छौं । तर पहिले पहिले कफी पेयको रुपमा हैन, सोझै त्यसको गेडा नै खाने गरिन्थ्यो । पछि पन्ध्रौं शताब्दीतिर आएर मात्र यमनका वासिन्दाले कफीको गेडालाई उमालेर पेयको रुपमा खान शुरु गरेका थिए ।
भनिन्छ, त्यसताका सुफी सन्तहरुले चैतन्य रहन रा रातभरि जागा रहेर प्रार्थना गर्नको लागि कफीको गेडा उमालेर खाने गर्थे ।
त्यसको सयौं वर्षसम्म यमनी किसानहरुले विशिष्ट खालका स्वाद र सुगन्ध भएको कफी उत्पादन गर्ने गर्थे । विस्तारै त्यो लोकप्रिय हुँदै अरब, टर्की र पर्सिया (इरान) सम्म फैलिँदै गएको थियो । सामान्यतः त्यसबेलासम्म कफी धार्मिक प्रयोजनको रुपमा उपयोग हुने पेय मानिन्थ्यो ।
सुफी सन्त परम्परामा महत्वपूर्ण पेयको रुपमा मान्यता पाइसकेको कफीले सोह्रौं शताब्दीमा थप लोकप्रियता प्राप्त गरेको थियो । सबैभन्दा पहिलो कफी हाउस इजिप्टको कायरोमा खुलेको थियो । त्यसमा सर्वसाधारणहरु भेला भएर कफी खाने, संगीत सुन्ने र धार्मिक विषयवस्तुहरु (सुफी गफ) को बारेमा चर्चा परिचर्चा गर्ने गर्थे ।
त्यसबेला कफी हाउसहरु कति महत्वपूर्ण मानिन्थ्यो भने त्यस्ता स्थानहरुलाई विद्वानहरुको स्कूल समेत भनिन्थ्यो ।
इस्लाम र चर्चले प्रतिबन्ध समेत लगाएको थियो
इस्लामिक क्षेत्रमा कफी कतिसम्म लोकप्रिय भयो भने त्यसलाई अरेवियाको वाइन समेत भनिन थालियो । फलतः सन् १५११ तिर धर्माधिकारीहरुको दवाबमा मक्कामा यसको सेवनमाथि प्रतिबन्ध समेत लगाइएको थियो । तर पछि १५२४ मा आएर तत्कालीन शासकले यसमाथिको त्यो प्रतिबन्ध हटाएका थिए ।
त्यसो त यसमाथि प्रतिबन्ध लगाउने काम इस्लामिक धर्माधिकारीहरुले मात्रै हैन, चर्चले समेत गरेका थिए । खासगरी, इथिओपियाका अर्थोडक्स चर्चले १९ औं शताब्दीतिर कफीको सेवनमा प्रतिबन्ध लगाएका थिए । त्यसरी कफीको सेवनमा निषेध गर्नुको कारण चाहिँ यसलाई ‘मुस्लिम पेय’ भनेर आरोपित गरिएको थियो । तर पछि विस्तारै कफी सेवन गर्ने प्रचलन बढ्दै गयो । चर्चले लगाएको प्रतिबन्धलाई वेवास्ता गरेर यसको सेवन गर्ने प्रचलन बढ्दै गयो ।
सबैभन्दा पहिले कफी टर्कीका मुस्लिम दासहरुको माध्यमबाट माल्टा भएर युरोप पुगेको थियो । पछि भेनिस र अरबमा व्यापार गर्नेहरुले कफीलाई युरोपको मुख्यभूमिसम्म पुर्याएका थिए । रमाइलो कुरा के छ भने पहिले पहिले कफी धनीमानीहरुले खाने पेयको रुपमा चर्चित थियो ।
हरेक वर्ष विश्वमा ४ सय अरब बढी मानिसले प्रयोग गर्ने कफीको फाइदा बारे केही चर्चा गरौं ।
विहान एक कप कफी पिउँदा शक्ति बढाउने र उर्जा दिने काम गर्छ । सिएनएनमा प्रकाशित एक रिपोर्टअनुसार, दैनिक ४ कपसम्म कफी खाने मानिसहरु असामयिक मर्ने खतरा कफी कहिल्यै नपिउनेहरुको तुलनामा ६४ प्रतिशत कम हुने गर्छ ।
कफीले मधुमेह र कलेजोको बिरामीमा जोखिम कम गराउने स्वास्थ क्षेत्रका अनुसन्धानकर्ताहरु बताउँछन् ।
१. कफी र मधुमेह
कफीले दुई प्रकारका मधुमेहबाट बचाउँछ । यूसीएलएका अनुसन्धानकर्ताका अनुसार कफी पिउँदा सेक्स हर्मोन (एसएचबीजी) को मात्रा बढाउँछ । एसएचबीजीले शरीरमा भएको सेक्स हर्मोन (टेस्टोस्टेरोन र एस्ट्रोजेन)को जैविक गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्दछ । जसले मधुमेहको नियन्त्रणमा सहयोग पु¥याउँछ । हार्डबड युनिर्भसीटी अफ पब्लिक हेल्थ (एचएसपीएच)का अनुसन्धानकर्ताहरुले मधुमेह–२ को जोखिम कम गर्न कफी पिउनुले बानीले सकारात्मक असर पर्ने देखिएको बताउँछन् ,
२. कफी र पार्किन्सनको रोग
अमेरिकका अनुसन्धानकर्ताहरुले गरेको एक अध्ययनले कफीको नियमित सेवनले पार्किनन्सन रोगको खतरा कम गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
त्यसैगरी क्याफिनले यो रोग लागेर हातगोडा चलाउन नसक्ने मानिसहरुमा फाइदा पुर्याउने कुरा एमसीगिल विश्वविद्यालयले न्यूरोलोजी पत्रिकामा प्रकाशित गरेको छ ।
३. कफी र कलेजोको क्यान्सर
इटालियन अनुसन्धानकर्ताहरुले पत्ता लगाएअुनसार कफीको प्रयोगले कलेजोको क्यान्सर लाग्ने सम्भावनालाई ४० प्रतिशत कम गर्छ । सो अध्ययनका अनुसार दैनिक तीन कप कफी पिउँदा सो रोग लाग्ने सम्झनामा ५० प्रतिशतसम्म कमी आउन सक्छ ।
उक्त अध्ययन प्रमुख डा. कार्लो ला भेचिया, मिलानको इस्टिटूटो डी की रिर्सचर फार्मोकोलिज मारियो नेग्री भन्छन्, ‘हाम्रो अध्ययनले कफी मानिसको शरीर र विशेषतः कलेजोलाई फाइदा गर्ने देखाएको छ ।’
अर्को एक अध्ययन रिपोर्टअनुसार, कफीको नियमित प्रयोगले प्राथमिक स्क्लेरोसिगं कालोन्गिटिस् (पीएससी)को खतरा कम गराउँछ । साथै कलेजोको पित्त नलीमा हुने रोग अटोइमीयूनी नाम रोगको खतरा समेत कम गराउँछ ।
त्यस्तै कफीले मदिराले कलेजोमा पैदा गर्ने सोराइसिसको सम्भावना २२ प्रतिशत कम गराउने पनि देखिएको छ ।
४. कफी र स्वास्थ्य
वेथ इजरायल डेकोनेस मेडिकल सेन्टर (बीआइडीएमसी) र हार्डवड स्कुल अफ पब्लिक हेल्थले कफीले हृदयघात हुनबाट बचाउने बताएको छ ।
जो व्यक्ति दिनमा चार कप कफी पिउँछ, उसलाई कफी नपिउनेको तुलनामा ११ प्रतिशत हृदयघातको सम्भावना कम हुन्छ ।
कफीका अन्य फाइदाहरुः
- अल्पायुमा हुने मृत्युलाई कमगर्छ
- मृत्युदर कम गर्न मद्दत गर्छ
- सिरोसिस हुनबाट बचाउँछ
- मल्टिपल स्क्लेरोसिसको जोखिम कम गर्छ
- कोलेस्ट्रोल क्यान्सर लाग्न नदिन सुरक्षा प्रदान गर्छ ।
नियमित कालो कफी पिउँदा क्यालोरी कम मात्रामा प्राप्त हुन्छ । कालो कफी पिउँदा २ क्यालोरी मात्र प्राप्त हुन्छ । यद्यपि यसमा चिनी र दुध पनि मिसाउँदा क्यालोरीको मात्रा बढ्ने र शरीरलाई शक्ति प्रदान गर्छ ।
अमेरिकास्थित स्क्र्यान्टन विश्वविद्यालयका अनुसन्धानकर्ताहरुका अनुसार कफी एन्टिअक्सिडेन्टसको स्रोत हो ।
अनुसन्धानकर्ता जोय भिनसन (पीएचडी) भन्छन्, ‘अमेरिकीहरुले अन्य खानेकुराबाट भन्दा कफीबाट धेरै मात्रामा एन्टिअक्सिडेन्ट प्राप्त गरिरहेका छन् ।’
उनले दिनमा एक वा दुई कप कफी पिउनु फाइदाजनक भएको बताएका छन् । क्याफिनयुक्त र डिक्याफिनेटेडले बराबर मात्रामा एन्टिअक्सिडेन्ट प्रदान गर्ने बताउँछन् ।
त्यसो त सबै खानेकुराहरुको फाइदा बेफाइदाहरु हुने गर्छन् । विशेष गरी, ठीक्कको मात्रामा खायो भने सबै खानेकुराहरुले फाइदा गर्छ भने त्यही खानेकुरा बढी खायो भने त्यसले हानी नोक्सानी पनि गर्छ सक्छ ।
यसै सन्दर्भमा कफीको बढी सेवनले गर्न सक्ने वेफाइदाहरु वा नकारात्मक प्रभावहरुका बारेमा केही चर्चा गरौं ।
कफीमा मूलतः क्याफिन पाइन्छ । क्याफिनले शरीरको स्नायु प्रणाली, मुटु र मांशपेशीहरुलाई उत्तेजित गर्ने काम गर्छ । फलतः कफी खाँदा हामीलाई अलि बढी जोश, जाँगर र स्फूर्ति आएको अनुभव हुन्छ ।
सामान्यतः कफीको सेवन सुरक्षित नै हुन्छ । तर दिनको ६ कपभन्दा बढी कफी सेवन गर्न थालियो भने चाहिँ क्याफिनिजम (Caffeinism) नामाकरण गरेको समस्या देखिन थाल्छ । यो समस्याको मुख्य लक्षण भनेको त्यस्ता मानिसहरुमा चिडचिडापन र अधैर्यताको लक्षण देखिन्छ । फेरि कफीको अत्यधिक सेवनले यसको लत पनि लाग्न सक्छ । कफी खाएपछि फूर्तिलो महसूस हुने नखाएमा अल्छी लाग्ने हुन सक्छ । अर्थात् अत्यधिक कफीको सेवन गर्ने बानी भएपछि त्यसमाथि नै निर्भर हुने, त्यो नखाँदा खैनी, चुरोट वा रक्सी खानेहरुलाई जस्तै कफीको पनि तलतल लाग्ने हुन सक्छ ।
त्यसैगरी, चाहिँदोभन्दा बढी कफीको सेवनले निद्रा राम्ररी नलाग्ने, नर्भस हुने, अधैर्य हुने, पेट गडबड हुने, वाकवाक लाग्ने, भोमिट हुने, मुटुको चाल बढ्ने र अन्य विभिन्न खालका नकारात्मक लक्षणहरु देखिन सक्छ । त्यसैगरी, ठूलो मात्रामा कफीको सेवन गर्दा, टाउको दुख्ने, कान बज्ने, रिसाहा हुने जस्ता समस्याहरु पनि देखिन सक्छ । त्यसैगरी, फिल्टर नगरिएको कफीको सेवनले कतिपयमा चाहिँ कोलेस्ट्रोल बढ्ने र मुटुको समस्या हुन सक्ने सम्भावना पनि हुन्छ ।
मुटुको समस्या नभएका मानिसहरुले दिनको ४–५ कप कफी पिउने हो भने पनि उसलाई कफीकै कारण चाहिँ मुटुको समस्या लाग्दैन ।
अत्याधिक मात्रामा कफी पिउँदा मात्रै त्यसको नकारात्मक प्रभाव पनि पार्न सक्छ । विशेष गरी कफीको बढी सेवनले सामान्य मानिसमा चिन्ता र तनाव जस्ता लक्षणहरु देखाउन सक्छ ।
त्यसैगरी, शरीरमा अत्यधिक क्याफिन जम्मा भयो भने त्यसले डिप्रेसन गराउन सक्ने कुरा एक अनुसन्धानमा पत्ता लागेको छ । क्याफिनको प्रयोगले एकाग्रतामा बृद्धि गराउने कारण मानिसमा एकोहोरोपनको मात्रा पनि बढाउँछ, जसको कारण मानिस डिप्रेसनको सिकार बन्छ ।
नेवादा स्कुल अफ मेडिसिन विश्वविद्यालयमा गरिएको एक अनुसन्धानले गर्भवती बन्न चाहने महिलाहरुले कफीको प्रयोग गर्न नहुने उल्लेख गरेका छन् । दि ब्रिटिश जर्नल अफ फर्माकोलोजीमा प्रकाशित उक्त अनुसन्धानले नियमित कफी पिउँदा महिलामा गर्भधारण गर्ने र गर्भपात गराउन सक्ने कुरा उल्लखे गरिएको छ ।
Photo credit: defiantcoffee.co
त्यसो त दिनको २०० मिलिग्रामभन्दा कम क्याफिन अर्थात् दैनिक २ कपसम्म कफकिो सेवन गर्दैमा गर्भवती महिलामा नकारात्मक असर हुँदैन । तर दैनिक रुपमै अति बढी कफी सेवन गर्न थालियो भने चाहिँ गर्भवती महिलाहरुमा नकारात्मक असरहरु पनि देखिन सक्छ । त्यस्त असरहरुमा विशेष गरेर गर्भपात हुने, समय अगावै बच्चा जन्मन सक्ने, कम तौलको बच्चा जन्मन सक्ने जस्ता समस्याहरु आउन सक्ने देखिएको छ ।
त्यसैगरी, स्तनपान गराइरहेको महिलाहरुले पनि दैनिक १, २ कप कफी पिउँदैमा कुनै समस्या नहुने देखिउको छ । तर दैनिक अत्यधिक कफीको सेवन गर्न थालियो भने चाहिँ दूधमार्फत् बच्चाको शरीरमा क्याफिन जाने र त्यसले बच्चालाई पेट दुख्ने, सुत्न नसक्ने समस्या आउने तथा बच्चा चिड्चिडे हुन सक्ने समेत देखिएको छ ।
त्यसै गरी बच्चाहरुमा पनि क्याफिनले नकारात्मक असर बढी गर्न सक्छ । त्यसैले बच्चाहरुलाई कफीको सेवन गर्न नदिनु नै जाति ।
त्यसैगरी, अति बढी कफी सेवन गर्न थालियो भने, ब्लड प्रेसर बढ्ने, आँखामा प्रेसर बढेर जलबिन्दू हुन सक्ने, रत्तःचाप बढ्ने, हड्डी खिइने जस्ता समस्याहरु पनि आउन सक्छ ।
तर यी लक्षणहरु भनेको दैनिक अति बढी कफीको सेवन गरेपछि कालान्तरमा देखिन सक्ने समस्याहरु हुन् । दिनको ३–४ कप कफी खाने हो भने यस्ता समस्याहरु आउन सक्तैन ।